နုနုဖွေးဖွေး ချိုင်းကြားအသားရည်ကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့… – BaHuTuTa
March 14, 2021 admin Lifestyle 0
သကြားနဲ့လီမွန်သီးဖျော်ရည်နဲ့ကို ရောပြီး ချိုင်းကြားတစ်လျှောက်ကိုပွက်လိမ်းပေးပါ။ မိနစ်၃၀ လောက်အကြာထားပြီး ရေအေးအေးလေးနေဲ့ဆေးကြောပေးပါ။ဒီလိုနည်းကို တစ်ပတ်သုံးကြိမ်လောက်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ထိရောက်မှုရှိတာကို မကြာခင်ခံစားတွေ့ရှိရမှာပါ။
2. နွားနို့+ နနွင်းမှုန့်
နွားနို့စစ်စစ်အနည်းငယ်နဲ့နနွင်းမှုန့်ကိုရောပြီး ချိုင်းမဲတဲ့ နေရာတေ ွကို အတ ွင်းထိ စိမ့်ဝင် နေ အောင်လိမ်းပေးပါ။ ချိုင်းခြားအသားရည် ရဲ့ညစ် ညမ်းမှုက အ ပေါ်ယံအသားရည်ပဲညစ်တာမဟုတ်ပဲ အတ ွင်းပိုင်း ဆဲလ်တေ ွပျက်စီးလို့ညစ်ညမ်းခြင်းဖြစ်တာ ကြောင့်အတ ွင်းထိ ထိ ရောက်အောင် ထိထိမိမိလိမ်းပေးဖို့လိုပါတယ်။
3. သင်္ဘောသီး+ နနွင်းမှုန့်
သဘောၤသီးကို ပျစ်ပျစ်လေးချေပြီး နနွင်းမှုန့်လေးနဲ့ရောနယ်ပြီး လိမ်းပေးပါ။ ချိုင်းအသားရည်ထဲကအညစ်ကြေးတွေကိုပါလျော့နည်းစေတဲ့အပြင် သဘာဝအသီးနှံစွမ်းအားကြောင့်မကြာခင် ဖြူဖွေးနူးညံ့လာမှာပါ။
4. နနွင်း+ မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ
နနွင်း မှုန့် နဲ့ မုန့် ဖုတ်ဆော်ဒါကို ရော ပြီးပစ်ပစ်ေ လး ဖျော်ပေးပါ။ ဒီလို ဖျော်ပေးပြီး ထ ွက်လာတဲ့ အရည်ပစ်ပစ်လေးကို ရေမချိုးခင် ၁၀မိနစ်လောက်အလိုမှာ လိမ်းထားပြီး နှပ်ထားပေးပါ။ ၁၀မိနစ်ကြာ ချိုင်းပေါ်မှာ နှပ်ထားပြီး မှ ရေအေးအေးနဲ့ ဖ ွားဖ ွားပါ အောင်ေ ဆးကြောသန့်စင်ပါ။ တစ်ပတ်ကိုအနည်းဆုံး ၂ ခါ လောက်တော့ လုပ်ပေးသင့်ပါတယ်။ အ တော်ကို ပျက်စီးေ နတဲ့ ချိုင်း ခြားအသားရည်ဆိုရင်တော့ တစ်ပတ်ကို ၄ခါ လောက်လုပ်ပေးပါ။